Qalabka Barafka Barafka (14K) - Popular Jewelry
Qalabka Barafka Barafka (14K)
Dib u eegis ah ayaa socota ...
Birta qaaliga ah: 14 Dahab Karat ah oo Dahab ah
Dherer: 15.1 mm * (0.59 Inch)
Ballac: 23.9 mm * (0.94 Inch)
Qiyaas. Miisaan: 0.7 garaam *
* Dhamaan miisaaniyada iyo cabbiraadaha waa qiyaas.
** Silsilad si gooni ah loo iibiyay.
Fadlan u oggolow toddobaad dheeraad ah si aad u dalbato.
Fadlan nala soo xiriir haddii aad hayso su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan cabbirro kale ama qaabab, helitaan, tilmaam, iyo xulashooyinka shaqsiyeed.
Marka la eego in dhammaan biraha dahabka qurxoon ay jilicsan yihiin oo la jari karo, waxay raacaysaa in dahabka iyo dahabka dahabka ah in la xidho oo si taxaddar leh loo maareeyo. Tani waxay si gaar ah u tahay kiisaska khafiifka ah, ee khafiifka ah ee dahabka qurxoon, kuwaas oo aad ugu nugul la dagaallanka marka loo eego dhiggooda culus. Qurxinta wanaagsan waa in laga saaraa jirka kahor jimicsi culus (sida shaqada dhismaha ama la xiriirida isboortiga) maxaa yeelay waxay ku xirnaan karaan walxaha shisheeyaha oo jeexi karaan. Maqaallada dahabka wanaagsan waa in sidoo kale laga saaraa ka hor qubeyska maadaama kiimikooyinka adag ee ku dhex jira shaambooyada iyo maydhashada ay waxyeelleyn karaan ama xitaa dhaawici karaan dahabka.
Waxaa si aad ah loogu talinayaa in dahabka dahabka ah, marka aan la isticmaalin, lagu keydiyo boorsada haanta ama weelka. Tani waxay ka ilaalinaysaa qalinka inuu kiimikaad la falgalo arrimo deegaanka ah (sida hawo oksijiin leh, maqaarka aashitada leh) taasoo haddii kale sababi lahayd in qalinku xumaado oo lumiyo dabiici ahaan, dhalaalaya caleen-cad.
Gabal gabal ahaan qalin ah oo horeyba u burburay ayaa lagu soo celin karaa xaaladdii asalka ahayd si dhakhso leh iyada oo loo marayo xalka nadiifinta kiimikada, sida midka aan siinno. Qubeyska dhaqsaha badan ee labaatan-ilbiriqsi ee nadiifiyaha ayaa ka saari doona lakabyada dharka iyo wasakhda lacagta.
Xallo kale oo guri looga heli karo ka saarista tarnish buildup ayaa sidoo kale la heli karaa, inkasta oo aysan ahayn wax ku habboon. Gogo 'yar oo jilicsan ayaa laga yaabaa in lagu meeleeyo xalka biyaha ee soodhada soodhada leh iyo alwaax aluminiin ah oo loo keeno karkariyo; dahabku waa inuu ku fiicnaadaa midab daqiiqado gudahood.
Dahabka dahabiga ah waa la gashan karaa inta lagu qubeysan yahay illaa iyo inta aadan u isticmaalin wax kiimikooyin adag ah qubayskaaga. Ka fogow adeegsiga dahabka dahabka ee barkadda dhexdeeda sababtoo ah koloriinku wuxuu dhaawici karaa birta dahabka ah.
Waxyaabaha lagu taliyay